SODAANIS NI INJIFATAMA – Beekan Guluma Erena
SODAANIS NI INJIFATAMA	Beekan Erena
Politics Category April 7, 2016	2 Comments
Gadaa Gabrabiin (Tesafye Gebrab)
Kufaatii Wayyaanee wantootni eeran baay’edha.Fakkeenyaaf Hanni kompiitaroota mana maree federeshinii Etiyoophiyaa irratti adeemsifame waan akka salphaatti ilaalamuu miti.Naannon Oromiyaa OPDO harkaa fuudhamtee Homaa Waraanaa Saamooraa Yuunusiin gaggeeffamuun buluun dhimma guddaadha.Sababa rakkoo beelaa biyyattii mudate jedhuun Lammiileen Ameerikaa baay’inaan gara biyyattii seenaa jiraachun isaaniis waan dhokate of keessaa qaba.Qabsoon Oromiyaa keessatti eegale, qabbanaawurra darbee eddoo hunda fudhataa, naannolee biyyatti kanneen biroo keessattis babal’achaa dhufuun isaatis kufaatii TPLF Ifatti kan agarsiisaniifi wayyanen akka boba’aa xumurte ifatti kan addeessudha.
Haala yeroo ammaa irraa hubatuun akka danda’amutti ‘’ Qabsoon Ummata Oromoo itti fufee jira’’ jechuurra ‘’ Qabsoon Ummata Etiyophiyaa itti fufee jira’’ sadarkaa jedhutti guddachaa jiraachun isaa ifatti mul’ataa jira. Fincila ummata Oromoorratti dabalatee Naanoo Amaaraa – Walqaayititti gaaffiin ummataa ‘’ Nuti Tigree Miti’’ jedhu akka itti fufetti jira. Yeroo dabre Gondar aanaa Daabaat keessatti finciltoonni Amaaraa daandii cufanii ooluun isaanii kan ifatti mul’ate ture. Gojjaam yeroodhaa gara yerootti dhippina lafaatin walqabatee komii qabu.Kaleessa barattoonni Yunivarsitii finfinnee ‘’ Nuti Shororkeessitoota Miti’’ jedhanii wayta gara Imbaasii Ameerikaa deeman tumaafii reebicha akkasumas hidhaatu isaan mudate.Naannoo kibbaa keessattii Saba Mursii; naannoo Hamariifi Sulula Oomootti ummataafi Poolisni walitti bu’uun isaanii dhagahameera.Poolisoonni ummata uffata sirnaan uffachuu hin eegalin haala akkam sukkaneessaa taheen akka morma isaanii walitti hidhanii deemanii turan miidiyaalee hawaasaa irratti daawwanneerra.Ka’umsi rakkoo sanas dhimmuma lafaati.Naannoo Gaambeellaafi Beenishaangulittis fincilli wal fakkaataan gaggeeffamaa tureera. Jaarsonni saba Hadiyyaa walgahii gochuudhaan ummata Oromoof gartummaa agarsiisun isaanii oduu guddaa ture. Yeroo dhihoo asittis walii galteen ummatoota kibbaafi Oromiyaa jiddutti jabaachaa dhufuun haala siyaasa egeree biyyattii kan eeru jechuun ni danda’ama. Walitti dhiheenyi ummata Oromoofi Amaaraa wal qixxummaafi wal kabajuu irratti bu’uureffates eegalamuun isaa waanuma argaa jirru.Hariiron kuni osoo kana dura eegalamee turee cunqursaafi gadadoon ummatarra gahaa ture durumayyuu hangana turuuf humna hin qabaatu ture.
Waajjira nageenyaatti aansee Sanadootni (ragaalen) Wayyaanen dhoksuuf barbaadu kan argaman kompiyutaroota mana maree federeeshinaa obboo Kaasaa T/Birihaniin hogganaman keessa. Dhimmootni akka Ramaddii Baajataa baay’ina ummataa irratti hundaa’e, Daangaa Naannolee jidduu, Komiilee sabaaf sablamoota adda addaa, Dhimmoota namoota buqqa’aniifii murteewwan kennaman hundi kan jiran waajjira kana keessa. Aangawoonni Wayyaanee kufaatin akka irraa hin oolle yoo beekan ragaalee balleessuu qaban keessaa inni kun isa tokko. Dhugumatti kana raawwataniiru yoo ta’e mala gaarii malataniiru jechuun ni danda’ama.
KAN HIIKE -Hiwi Elona
← DHIIFAMA moo NAGEENYA?
NA BAASI BIEMMADDUU →
2 thoughts on “SODAANIS NI INJIFATAMA”	YeyisApril 7, 2016 at 7:46 pmPermalink	Hidhaa tokkummaa, furtuu gudunfaa, suduuda jilbibbii gola onnee eenyummaa keessaa dhikkiffattu walitti gudunfee aantii isaaf maannaagee yaadaan imalee hinaaffaa hidda dhiiga irraa burqiteen lammii isaatiif kan mataa bowwaafatu marsariitiin kun galaa hin aloofne nuuf kudhaammattee jirti.
Reply	Mo'iboonApril 8, 2016 at 4:17 pmPermalink	What is the meang of negotiations with us, please it is better to answer the Qs rather than thinking as 16 century